FIFAMALIANA TAO AN-TOKANTRANO :: Nandositra ilay vehivavy voatondro ho nahafaty ny vadiny • AoRaha
FIFAMALIANA TAO AN-TOKANTRANO Nandositra ilay vehivavy voatondro ho nahafaty ny vadiny
Tsy hita popoka ny vehivavy iray ahiana ho tompon’ antoka tamin’ny fandratrana nitarika ny fahafatesan’ny vadiny, tany Andapa, ny alin’ny alatsinainy teo. Teny an-dalana nitondrana azy hamonjy hôpitaly no nindaosin’ny fahafatesana ilay lehilahy.
Voalaza fa voa mafy ny taovam-pananahany, nandritra ny fifamaliana nisy teo amin’izy mivady, tamin’io alina io.
Naharitra ora maro ny fifamaliana teo amin’izy roa saingy niafara tamin’ ny zavatra hafa. Naheno an’ilay lehilahy niantso vonjy ny mpiray vodirindrina, tokony ho tamin’ny iraika ambin’ny folo ora alina. Tonga maro teny an-toeana ny olona nijery ny zava-misy. Tsy hita ny vehivavy fa ilay lehilahy irery no tratran’izy ireo tao.
« Nitarainany ho maharary azy mafy ny taovam-pananahany. Mety ho voadona mafy izany matoa nitarika hatramin’ny fahafatesany mihitsy», hoy ny loharanom- baovao. Mety mitombina ny ahiahy, araka ny nambaran’ ny mpitandro filaminana, fa ny vadiny ihany no nikasi-tanana an’ilay lehilahy noho izy nandositra. Efa mandeha ny fikarohana azy any an- toerana. Fantatra fa nivory nandinika ny momba an’ity tranga ity ny «Organe mixte de conception» na ny OMC, omaly.
tamin’izany ny fomba hoentina hitadiavana sy hisamborana an’ilay voarohirohy. «Tsy maintsy fantarina sy apetraka mialoha ny zavatra hatao rehetra hisorohana ny mety fisiana trangan-javatra hafa toy ny fitsaram-bahoaka», araka ny fanazavana avy amin’ny mpitandro filaminana ihany. Voalazan’ny loharanom-baovao hatrany fa milaza ny tsy hanaiky mora amina trangana vono olona toy izao ny mponina any Andapa. Vetivety rahateo dia nalaza teo an-tanàna ny zava-niseho.
Fanatsarana ny asam-panjakana Hamoraina ny fanaovana taratasim- panjakana hatreny amin’ny fokontany
Rugby- « Barthes trophy » Hiadiana mafy amin’i Zimbaboe ny tapakilan’ny vondrona A
Fiainana mpanakanto Namoha ny fitiavan’i Lorah mihaingo ny fitafin-dreniny
Fandaminana eny ifotony Mitohy ny fifanolanana momba ny fanoloana sefo fokontany
DISADISAM-PIANAKAVIANA :: Mpirahalahy nifanindrona antsy
FIPARITAHAN’NY ARETINA :: Mihamahazo vahana any amin’ny faritra hafa ny kitrotro